काठमाडौमा १६ गते देखि निषेधाज्ञा लागू हुँदा बैंक र सरकारी कार्यालय के हुन्छ ? – Sapana Sanjal
काठमाडौं उपत्यकामा १६ गतेदेखि निषेधाज्ञा लगाइनेनिर्णय जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गरेको छ । आफ्नो गन्तब्यमा जाने दुई दिनको समय दिएर काठमाडौमा कडा लकडाउन गर्न लागिएको हे ।काठमाडौंसहित उपत्यकाका तीनवटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूबीच बैठकमा निषेधाज्ञा लगाउने सहमति भएको हो ।
Prevकोरोना संक्रमित पतिलाई मुखबाट सास दिएर बचाउने पत्नीको प्रयास !
Sapana Sanjal : पछिल्लो समय अभिनेत्री प्रियंका कार्की सामाजिक सञ्जालमा एकदमै छाउने गरेकी छिन् । उनी अहिले गर्भवती अवस्थामा छिन् । तर हरेक हप्ता उनको एउटा न एउटा फोटोले सामाजिक सञ्जाल तताईनै रहेको छ । धेरै फोटो हालेको त्यो पनि गर्भवती अवस्थामा भनेर धेरैले उनको ट्रोल समेत बनाउँदै आएका छन् । तर यी सबै कुराका बाबजुद पनि उनी आफ्नो मस्तीमा तल्लीन नै रहेकी छिन् । एक हप्ता पनि बितेको छैन उनको श्रीमान् तथा अभिनेता आयुषमान देशराजले बेबी सावर गरिदिएको त्यस लगत्तै उनले आफ्नो साथीहरु संग रमाईलो गरेको फोटो सामाजिक सञ्जालमा फेरी अपलोड गरेकी छिन् । ए लफ्ट होटललाई धन्यवाद दिँदै उनले आफ्ना साथीहरु संग मस्ती गरिरहेको तस्वीर अपलोड गरेकी हुन् । धेरै जसोले यो फोटोमा पनि नेगेटिभ कमेन्ट नै गरेका छन् । एक जनाले केमन्ट गरेका छन् कहिले जन्माउने हो जन्माईहाल्नु नाटक धेरै नगर्नु । उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेकी छिन् -मेरा फेब केटीहरुसंग सधै एउटा समय । ए लफ्ट होटल काठामाण्डौमा अद्भुत बसाई भएको थियो । हामी संगै रहनु भएकोमा धन्यबाद । हामी संग साँच्चै नै सुनौलो समय थियो । उनले अन्त्यमा फोटोका लागि अनिश शाक्य र होटलको जुरी लाई धन्यबाद दिएकी छिन् ।